အချိန်မတိုင်ခင် “ချစ်” တော့မလို့လား? | သိလိုရာမေး
ထွေလာဆန်းပြား လိင်ဆောင်းပါး အချိန်မတိုင်ခင် “ချစ်” တော့မလို့လား?
ခုခေတ်မှာ Premarital Sex ဆိုတဲ့ အသုံးအနှုန်းကို သိတဲ့သူက ရှားမယ် ထင်ပါတယ်။ အဓိပ္ပါယ်ကတော့ မိန်းမနဲ့ယောကျာ်း လက်မထပ်ခင် အတူနေတာကို ပြောချင်တာပါပဲ။
Living Together လို့လဲ ပြောလို့ရပါတယ်။ ဟိုးအရင်ရှေးအချိန်တွေတုန်းကတော့ ဒီလို အမျိုးသားနဲ့ အမျိုးသမီး လက်မထပ်ခင် အတူနေတဲ့ကိစ္စကို ဘာသာရေးအရ ကန့်သတ်ထားတာမျိုးတွေရှိသလို အပြစ်တစ်ခုအနေနဲ့လဲ သတ်မှတ်ထားတဲ့ နိုင်ငံတွေရှိခဲ့ပါတယ်။
ဒါပေမယ့် ၁၉၆၀ ပြည့်နှစ်နောက်ပိုင်းတွေက စပြီး အထူးသဖြင့် အနောက်နိုင်ငံတွေမှာ ဒီအလေ့အထကို လက်ခံခဲ့ကြပေမယ့်လဲ ခုချိန်ထိ လက်မခံသေးကြတဲ့ နိုင်ငံတွေလဲ ရှိတော့ရှိနေပါသေးတယ်။ ကျွန်တော်တို့ မြန်မာနိုင်ငံမှာတောင်မှ ဒီလို လက်မထပ်ခင် Living Together နေတဲ့ အလေ့အထကို လက်ခံသူတဝက်… ဆန့်ကျင်သူ တဝက်ရှိနေကြပါသေးတယ်။
လောကကြီးမှာ ဘယ်လိုအရာမျိုးပဲ ဖြစ်ဖြစ် အကောင်းနဲ့ အဆိုးဆိုတာတော့ ဒွန်တွဲနေတာပါပဲ။ ဒီတော့ သမိုင်းကြောင်းလဲ ပြောပြပြီးပြီဆိုတော့ ခု သိလိုရာမေးကနေ Premarital Sex ရဲ့ အားသာချက် အားနည်းချက် လေးတွေကို တင်ပြဆွေးနွေးသွားချင်ပါတယ်…
အိမ်ထောင်ရေး နဲ့ လိင်ကိစ္စ ဒွန်တွဲနေတယ်ဆိုတာ လူတိုင်းသိကြပါတယ်။ တရားဝင်လက်ထပ်ခြင်းမပြုခင်မှာ ဒီလို အတူနေကြတာက လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအရ အတွေ့အကြုံတစ်ခုကို ပေးတယ်လို့လဲ ပြောလို့ရပါတယ်။ အချိန်အတိုင်းအတာတစ်ခုထိ LT သက်တမ်းရင့်တဲ့ အတွေ့အကြုံရှိတဲ့သူအချင်းချင်း လက်ထပ်ကြတဲ့အခါမှာ တခြားသူတွေထက် စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအရရော ကိုယ်ခန္ဓာပိုင်းဆိုင်ရာအရရော အတူနေတဲ့အခါတိုင်း သက်သောင့်သက်သာရှိပါလိမ့်မယ်…
စစ်တမ်းတွေအရ သမီးရည်းစားဘဝမှာ ဒီလိုပုံမှန်လိင်ကိစ္စရှိတတ်ကြတဲ့ တချို့စုံတွဲတွေက မရှိတဲ့စုံတွဲတွေထက် တစ်ဦးနဲ့တစ်ဦး သံယောဇဉ်နှောင်ကြိုး ပိုတွယ်တတ်သလို တစ်ဉီးနဲ့တစ်ဉီး ယုံကြည်မှုလဲ ပိုများတတ်ပါတယ်တဲ့…
လက်ထပ်မှ လိင်ဆန္ဒပြည့်ဝတာမဟုတ်တဲ့အတွက် ဒီလိုအတူနေတဲ့ဆက်ဆံရေးရှိမယ်ဆိုရင် Stress တွေ Pressure တွေနည်းမယ်… တချို့သောသူတွေအတွက် ကျန်းမာရေးကို တဖက်တလမ်းက အထောက်အကူပြုနိုင်ပါသေးတယ်…
လက်မထပ်ခင် အတူနေတဲ့အခါမှာ တွေ့ကြုံရနိုင်တဲ့ အဓိကပြဿနာတစ်ခုကတော့ မလိုလားအပ်တဲ့ ကိုယ်ဝန် နဲ့ လိင်ကနေတဆင့် ကူးစက်တတ်တဲ့ ရောဂါတွေ ရနိုင်တာပါပဲ။ အကာအကွယ်သုံးတာတော့မှန်ပေမယ့် တခါတလေမှာ အခန့်မသင့်ရင် ဒီအခြေအနေတွေ တွေ့ကြုံရနိုင်ပါတယ်…
ဒါကတော့ မိန်းကလေးတွေအတွက်ပါ… အတူနေတဲ့အခါမှာ သူရောကိုယ်ရော သာယာမှု တွေ ပျော်ရွှင်မှုတွေ ရတာမှန်ပေမယ့် ကိုယ်က ဘဝတစ်ခုလုံးနဲ့ ရင်းပြီး သူနဲ့ပဲ လက်ထပ်မှာမို့လို့ သူနဲ့အတူနေလိုက်တယ်။ ဒါပေမယ့် ခုခေတ်မှာ သစ္စာရှိတဲ့လူက ရှားပါတယ်… တာဝန်မယူချင်ဘဲ စားပြီးနားမလည်လုပ်တတ်တဲ့သူနဲ့ တွေ့တဲ့အခါမှာ ကိုယ့်ဘက်က စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအရ ထိခိုက်နစ်နာမှုတွေ ရှိနိုင်ပါတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံမှာ Living Together နဲ့ပက်သက်ပြီး လူတိုင်းက ဒီကိစ္စကို လက်မခံနိုင်သေးတဲ့အတွက် တချို့လူတွေက ဝေဖန်ကဲ့ရဲ့တာမျိုးတွေလဲ ကြုံရနိုင်ပါတယ်။
ဒီလို အားသာချက် အားနည်းချက်တွေရှိနေပေမယ့်လဲ ကိုယ့်ဘဝ ကိုယ့်ရွေးချယ်မှုဖြစ်တဲ့အတွက် ကိုယ့်စိတ်ကူးထဲမှာ Right Time လို့ထင်ရင်တော့ ဘေးစကားတွေကို အာရုံစိုက်စရာမလိုပါဘူး။ ဒီတော့ လက်မထပ်ခင် အတူနေခြင်း မနေခြင်းကိစ္စက ကိုယ့်သဘောအတိုင်းပါပဲ။